Nhau - Mavharuvhu eMaindasitiri, Marobhoti Panzvimbo YeKushanda kweBhuku
Mavharuvhu eindasitiri, maRobhoti Panzvimbo peManyore Anoshanda
MuChina, uko mari yebasa iri kukwira uye zviwanikwa zvevanhu zviri kushomeka, marobhoti akatanga kushandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana-siyana, uye vashandi vanotsiva mitsetse yekugadzira mavharuvhu nemarobhoti vanogamuchirwawo mumafekitori akawanda anozivikanwa evharuvhu.
Fekitori inozivikanwa yevharuvhu muDenmark yakakanganiswa neCovid-19, uye vashandi havana kukwanisa kupedza basa sezvinodiwa nenguva shoma yekushanda. Izvi zvakapa vatengi pfungwa yekushandisa marobhoti kutsiva mashandiro ebhuku, uye mashandisirwo emutsara uyu wekugadzira wakura muChina uye wave kuzivikanwa nevatengi.
Isu takagadzira zvigadziriso zvekugadzirisa gedhi valve miviri.
Michina iyi mitatu ndeiyi:
CNC Matatu ekutenderedza muchina, kuona kutendeuka kwezviso zvitatu zveflange zvevhavhavha yegedhi panguva imwe chete.
Horizontal hydraulic Three Side Drilling Machine, kuona kuchera pazviso zvitatu zveflange panguva imwe chete.
Maviri Side CNC Kuisa Chisimbiso Machining Machine, kuona panguva imwe chete kugadzirisa kwe5 degree angle mukati memuviri wevharuvhu.
Marobhoti anotsiva kugadzirwa kwemaoko kuchengetedza mari yevashandi. Panguva imwecheteyo, marobhoti anogona kuita 24-awa kushanda, zvinoda kuti robhoti rimwe chete ritarise michina mitatu. Uye zvakare, iyo otomatiki yekusangana mutsara yekugadzira modhi inogona kuchengetedza yakawanda nzvimbo, kuita kuti kuronga kwefekitori kuve compact, uye kuchengetedza mutengo wezviwanikwa zvevhu.
Nguva yekutumira: Mar-16-2021